မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: On Air Vs World Within (The World They live in)
ဇာတ်ကားနာမည်တွေ မှတ်သွားပါတယ်။ ဟိုပြန်ဖြစ်ရင်ဝယ်ခဲ့မလို့။
ဇာတ်ကားများကို မကြည့်ဖူးသောကြောင့် သဘောထား မကွလွဲတော့ပါ။
ရုပ်ရှင်တွေ မကြည့်သေးခင် ဒီကို အရင်လာတယ်။ အမြည်းကောင်းလို့ ။ :D
3/08/2009 5:50 PM
တော်မီလဲ on air ကိုပဲကြည့်ဖြစ်ပြီး အဲဒီ့ကားကိုပဲ ပိုကြိုက်တယ်..world within က မင်းသားမင်းသမီးကြိုက်ပေမဲ့ အရမ်းပျင်းစရာကောင်းလို့ ဆက်မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး..ကြည့်ဖို့လဲသိပ်အချိန်မရှိတာပါတယ်.. အခုတော့ ဘာကားမှ မကြည့်ဖြစ်ဘူး Boys Before Flowers/Boys Over Flowers က လွဲလို့ပေါ့..
3/11/2009 2:54 AM
waiting for new post.....
3/21/2009 12:52 PM
Thanks for sharing. I am going to watch "On Air". The second leading actor is my favourite actor, Lee Bum Soo in " Surgeon Bong Dal Hee".If you have time , also watch it as I want to recommend it. :-D .Although he is short and ugly, I like him in that drama.
okay SS. I will give itatry. Maybi will like him in the drama u recommended. Thanks for sharing :D